ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းက ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးကျန်းမာရေး » ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းက ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
ရေးသားသူ Poe Ei Win ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ hellosayarwon.
လက်ရှိမှာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးမှုတွေလုပ်နေကြတာ အကုန်လုံးအသိဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနေတယ်၊ ပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုမှုတွေ ရေးသားမှုတွေကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒီအတွက် မိဘတွေရင်ထဲမှာ သို့လောသို့လော သံသယတွေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာရပါတယ်။ ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါအကြောင်းနဲ့ ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းကို ပြီးပြည့်စုံအောင် Helloဆရာဝန်က တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါဆိုတာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပြင်းထန်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါလိုပဲ ခြင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါအတွက် ကုသဆေးမရှိဘဲ သေဆုံးမှုနှုန်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မသန်မစွမ်းဖြစ်နိုင်မှုနှုန်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်လို့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
WHO ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အခုဆိုရင် အရှေ့တောင်အာရှ နှင့် အနောက်ပစိဖိတ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံ ၂၄ နိုင်ငံဟာ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်ပွားနေပြီး လူပေါင်း ၃ သန်းထက်မနည်းမှာ ကူးစက်နိုင်ချေမြင့်မားနေပါတယ်။ အဲဒီ ၂၄နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်လူနာပေါင်း ၆၈၀၀၀ ခန့်ရှိနေပြီး ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူလူနာ ၁၃၆၀၀ မှ ၂၀၄၀၀ ခန့်ထိရှိနေပါတယ်။ အဓိက ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပေမယ့် အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ချေလည်းရှိပါတယ်။
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ လူတော်တော်များများမှာတော့ လက္ခဏာသိပ်မပြတာ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝမပြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အစပိုင်းမှာ ဖျားတာ၊ ချမ်းတုန်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ ပျို့တာ၊ အန်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဦးနှောက် ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ရာကနေ အတက် လက္ခဏာတွေပါဖြစ်လာပါတယ်။ တချို့လူနာတွေမှာဆိုလျှင် သတိမေ့သွားတာ (coma) နဲ့ ကိုယ်တစ်ပိုင်းသေသွားတာတွေပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်လို့ သံသယရှိပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပြီး စစ်ဆေးမှုတွေ၊ စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ရပါမယ်။ ဆရာဝန်ကလိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေကတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာ၊ သွေးနှင့် ကျောရိုးတွင်းအဆီတို့ကိုဖောက်ပြီး အထူးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခံအားစနစ်က တန်ပြန်တိုက်ထုတ်ဖို့ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ တုံ့ပြန်ပစ္စည်းတွေကို ဒီဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်တွေက တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
• ခြင်မကိုက်အောင် လိမ်းတဲ့ဆေးတွေ လိမ်းပြီး အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်တွေ ၀တ်သင့်ပါတယ်။
• လေအေးပေးစက်ရှိတဲ့ အခန်း သို့ ခြင်စကာတက်ထားတဲ့အခန်း သို့ ခြင်ထောင်နဲ့ အိပ်သင့်ပါတယ်။
• ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရနေပါပြီ။ ဆရာဝန် သို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပါ။
ကာကွယ်ဆေးက နှစ်ကြိမ်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ်ကြား ၂၈ ရက်ခြားရပါမယ်။ ၃နှစ်အောက်ကလေးအတွက် ဆေးပမာဏဟာ ၃ နှစ်နှင့် ၃ နှစ်အထက်ကလေးတွေအတွက် ဆေးပမာဏထက် ပိုနည်းပါတယ်။ အသက် ၁၇ နှင့် အထက်ရှိတဲ့သူတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် သို့ တစ်နှစ်ထက်ပို တုန်းက ထိုးခဲ့ဖူးသော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေစိုးရိမ်နေရသေးရင် booster အနေနဲ့ ထပ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေအတွက် booster လိုမလိုတော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။
ဘယ်ဆေးဝါးမဆိုမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးမှာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရောင်ရမ်းတာ၊ နီရဲတာနဲ့ နာကျင်မှုအနည်းငယ်ရှိနိုင်တယ်။
တစ်ချို့ ကလေးတွေမှာ မူးလဲတာ၊အန်တာ၊သတိလစ်တာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အလွန်အမင်း ရှားပါးပါတယ်။ အယောက်တစ်သန်းမှာ တစ်ယောက်နှုန်းလောက်သာရှိနိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးမထိုးမီ သင် ဒါတွေသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုမျိုးဖြစ်ဖူးလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မထိုးသင့်ပါဘူး။
Live vaccine ဖြစ်တဲ့ အတွက် မွေးရာပါရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ကိုယ်ခံအားနည်းနေသူတွေ၊ AIDS ရောဂါသည်တွေ မထိုးသင့်ပါဘူး။
ဖျားနေလျှင် သို့ ပြင်းထန်ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ဆေးသောက်နေရလျှင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ ထိုးသင့်ပါတယ်။
တချို့ ကာကွယ်ဆေးတွေက G6PD ရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ ထိုးပြီးနောက်ပိုင်း သွေးယိုစိမ့်မှုတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့် စောင့်ကြည့်ရတာမျိုးတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။ သို့သော် WHO မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာတော့ မရှိပါဘူး။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ကလေးသူငယ်များအား ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးတွေ အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ အခမဲ့ထိုးပေးနေပါပြီ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင် ကလေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ ဆေးဝါးရယ်လို့မရှိပါဘူး။ အခုလက်ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ဆေးဝါးတွေက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက အသိအမှတ်ပြုထားပြီး အကြိမ်ကြိမ်အခါခါစစ်ဆေးထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ချရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ချေက အယောက်တစ်သန်းမှာ တစ်ယောက်နှုန်းသာရှိပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးမထိုးလို့ ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ရင်တော့ သေဆုံးနိုင်ချေက သုံးယောက်မှာ တစ်ယောက်နှုန်းရှိတဲ့အတွက် ချိန်ဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝငျဘာ 21, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝငျဘာ 21, 2017
. Accessed February 23, 2017.
http://www.webmd.com/brain/encephalitis-japanese . Accessed February 23, 2017.
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_encephalitis . Accessed February 23, 2017.
နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါနှင့် သတိပြုဖွယ်ရာများ
လူတစ်​​ယောက်​က တစ်နေ့ ဆားပမာဏ ဘယ်​​လောက်​စားသင့်​လဲ